Fararanondanona ny tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena ny Talata 14 Janoary 2020 . – Ministère de la Jeunesse et des Sports
Satria natolotr’i Andriamatoa TINOKA Roberto, Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tamin’ny fomba ofisialy an’i Andriamatoa Nicolas Dupuis ny birao fiasany amin’ny maha Consultant na manampahaizana manokana miara- miasa amin’ny Minisitera azy .
Taorian’ny fiarahabana tratry ny taona , dia nambarany tamin’izany fa noho ny ezaka goavana nataon’ ity Mpanazatra ity dia tafiditra anisan’ireo sangany aty Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy !
» Noporofoinao hoy Andriamatoa Ministra ny fitiavanao ny BAREA satria na dia teo aza ireo antso sy tolotra mampilendalenda avy amin’ireo tarika matanjaka , taorian’ireny vokatra manan- tantara tamin’ny CAN 2019 , ireny izay nahatafakatra an’i Madagasikara tany amin’ny ampahefadalana ; dia tsy naharototra anao noho firaiketamponao amin’ireo mpilalao sy ny fankatoavanao ny fiangaviana ny tenanao hanohy ny asa maha mpanazatra , avy amin’ny Filohampirenena ANDRY Rajoelina !
Fitiavana lehibe indrindra izany ! »
Ho fanamafisana ny ezaka vita ary dia tsy hianona fotsiny amin’ny maha mpanazatra azy Andriamatoa Dupuis fa hisahana koa ny fampandrosoana ny Baolina kitra amin’ny ankapobeny, ny fampiroboroboana ny fiaraha- miombon’antoka eo amin’ny Fanjakana sy ny tsy miankina ary koa ny fikarakarana ireo tanin- ketsa any ifotony .
Izany no natao moa dia ho fanohizana ireny fahombiazana azon’ny ekipam-pirenena Barea ireny .
Ary koa tafiditra amin’ny fanatanterahana ny Velirano faha 13 ‘ny Filohampirenena ANDRY Rajoelina :
» NY FANATANJAHANTENA, HAMBOMPOMPIRENENA » .
Marihina moa fa nametrahana fitaovampiasana raitra io toerampiasana io mba hahazoana vokatra mahafapo .
Nohamafisin’ Andriamatoa Minisitra fa tsy hikely soroka ny Minisitera sahaniny, mba hitohy hatrany ilay hiakam-pandresena mahazatra ny mpitia baolina kitra rehetra manao hoe : ALEFA BAREA !
» Fa androany aloha hoy izy dia miara- mihika isika manao hoe : ALEFA NICOLAS ! »
Teo amin’ny fandraisany Fitenenana dia notsindrian’i Andriamatoa Nicolas Dupuis fa hatao laharampahamehana ny fampiakarana hatrany ny lentan’ny baolina kitra Malagasy sy fanampiana ny programan’ asan’ny Fitondrampanjakana amin’ny fananganana Sekolin’ny baolina kitra ho an’ireo katitakely .
Nisy moa ny fifanolorana mari-pahatsiarovana teo amin’izy mirahalahy sy ny fitsidihana ireo efitrano fiasana etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina